30 Kushambadzira Statistics Iwe Haufanire Kupotsa | Martech Zone
30 Kushambadzira Statistics Iwe Haufanire Kupotsa
China, August 22, 2013 China, August 22, 2013 Douglas Karr
Chero infographic inounza vashambadzi kumashure kweiyo yekuyedza kwavo yakasimba chaizvo. Isu tanga takangogara nemutengi nhasi uye tichifamba kuburikidza neyekutanga yeakakura zvemukati zano ... kugadzira zvazvino, kazhinji uye zvinoenderana zvemukati papuratifomu yakagadziriswa yekutsvaga. Neiyo yekutanga basement iripo, kuve nechokwadi chekuti nhare mbozha inoendeswa. Uye pamwe chete neizvozvo, kuvandudza hushamwari hwehukama kuvaka chiremera uye pesvedzero - kutyaira vanhu kudzokera kukutengesa kwako pamhepo. Uye, hongu, inosanganisira mifananidzo kuburikidza ne infographics uye vhidhiyo yevashanyi vanoenda kwavari.
Optimind yaisa pamwechete ichi chidimbu chemakumi matatu emadhijitari ekushambadzira kuti urambe uchifunga nezveako epamhepo kushambadzira uye ecommerce kuvepo.
Iyi infographic yakagadzirwa naOptimind, a Phillippines based firm. Yezve digital kushambadzira masevhisi, unogona kushanyira www.optindindigital.com. For web Design uye seo, Shanya www.chapup.com.
GoAnimate: Dhizaini, Gadzira uye Govera Mifananidzo yeVamwari
Aug 29, 2013 na9: 15 PM
Dhijitari yekushambadzira agency uye makambani anganyatso kudzidza zvakawanda kubva kune ino posvo!
Sep 12, 2013 pa 8: 22 AM
Unogona here kupa iyo kodhi kuti utorezve iyi infographic.
Dec 24, 2013 pa 2: 17 AM
Mateti anobatsira kwazvo ekuronga danho rinotevera uye anodzidzisa kwazvo!